Fitsirihana ny lisi-pifidianana : Niditra lalina ny OIF -
AccueilRaharaham-pirenenaFitsirihana ny lisi-pifidianana : Niditra lalina ny OIF
Fitsirihana ny lisi-pifidianana : Niditra lalina ny OIF
24/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Azo atokisana ahafahana manatanteraka fifidianana ny taona 2018, ny lisi-pifidianana nomena ho tsirihinay », io no nambaran’ ny jeneraly Siaka Sangaré, lehiben’ny iraka mpitsirika ny lisi-pifidianana anivon’ ny OIF, na ny vondrona iraisam-pirenen’ny frankofonia. Tapitra ny faha- 21 ny volana septambra teo ny fitsirihana notanterahin’ ny OIF, ary tetsy amin’ ny foiben’ ny Ceni Nanisana no nanaovan’izy ireo ny tatitra. Manaitra tokoa ny tatitra nataon’ ny OIF, taorian’ ny fitsirihana, satria dia mifanohitra amin’ ny voalazan’ireo fiarahamonim-pirenena. Ny Ceni izao aza dia nanaitra ny HCC, amin’ ny tokony hijerena ny fomba ahafahana manokatra ny lisitra. Ny tatitry ny tetik’asa PEV rahateo, izay efa milaza fa an’arivony ireo tanora feno 18 taona no tsy tafiditra anatin’ ny lisi-pifidianana. Ankilany ny vahiny indray, dia milaza fa azo atokisana ahafahana manatanteraka fifidianana ity lisi-pifidianana ity. Voalazan’ny jeneraly Siaka Sangaré, nandritra ny fanolorana ny vokatry ny fitsirihana ihany koa, fa manaraka tsara ny lalàna iraisam-pirenena momban ny zon’olombelona ity lisi-pifidianana ity. Izany hoe ny fahaverezan-jon’ireo tanora maro feno valo amby enimpolo taona ireo ve izany, dia manaja ny zon’olombelona.
Mahavalalanina tanteraka ny zava-misy amin’ izeo fotoana izao, satria dia dian-tanan’ny sehatra iraisam-pirenena no mibaiko ny Malagasy. Azo lazaina mihitsy aza, fa sitrak’izy ireo angamba ny hisian’ny korontana eto an-toerana aorian’ny fifidianana, ho tombontsoa manokan’ny vahiny. Modina tsy re rahateo ny hikiak’ireo fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika milaza, fa tsy tomombana ny lisi-pifidianana. Ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, izay tompon’andraikitra ihany koa, satria dia minia tsy mamaly ny fakan-kevitra nataon’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Toa tsy mifampihaino intsony isika Malagasy, indrindra ireo mpisehatra amin’ ny fanomanana ny fifidianana. Tsy ho gaga isika rahampitso raha toa hiady sy hahantra eto, satria dia lalaovin’ny vahiny tanteraka. Izy ireo tokoa ve izany izao no “patro”, satria dia isan’ny manome vola betsaka ahafahana manatanteraka fifidianana. Isika Malagasy anatin’ny fahantrana kosa, dia tsy azo toavina, ary tsy azo inoana.
Tahotry ny hamoahana ny marina mahakasika ireny hosoka sy hala-bato faobe, nandritra ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena farany teo, no hanaovan’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ny Prefektoran’ny tanànan’Antananarivo antsojay amin’ireo vahoaka mitaky ny mangarahara ...Tohiny
Marc Ravalomanana : Hamerina ny fandriam-pahalemana
Hvm Analamanga : Manolotra an-dRajaonarimampianina ho kandidà